ကျောက်သင်ပုန်းလေး. . . | Life Diary with living Heart
Life Diary with living Heart
ကျောက်သင်ပုန်းလေး. . .
ကမ္ဘာတစ်ခုမှသည် တခြားကမ္ဘာတစ်ခုဆီသို့ ၊
မမြင်ရသော နရီစည်းချက်ကျကျ လွမ်းဆွတ်မှုများ ၊
ဒီရေမြင့်တက်လာသကဲ့သို့သော ချစ်ခြင်းတရားတစ်စုံသည် ငါ့နှလုံးသား၌ ရေပြင်ပေါ်မှ လှေငယ်ပမာလူးလွန့်လှုပ်ရမ်းလျှက်…..
ဟိုရှေ့ဆီမှာ ၀ိုးတိုးဝါးတားလမ်းတခုဆီ ဦးတည်လျှက် ၊ မျက်လွှာချလို့ တွဲလက်မဖြုတ်ခဲ့နဲ့ကွယ် ငါကြောက်တယ် ချစ်သူ။ ဆည်းဆာမှာ အိပ်တန်းလိုက်ရှာတဲ့ ငှက်ငယ်လို မင်းရင်ခွင်မှာ နားပါရစေတော့။
ဘယက်တစ်ခုဆီမှ ပြုတ်ထွက်သွားသော ပုတီးစေ့များလို ….တစ်စစီကျဲပြန့်နေတဲ့ ငါ့မျှော်လင့်ချက်တွေကို….ငုတ်တိုင်ဆီိမှာချည်ချည် ၊ သစ်ပင်ဆီမှာချည်ချည် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်မသွားဖို့ ပျိုးထောင်ပေးပါချစ်သူ။ ထူးဆန်းတဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာ နားနေပါရစေတော့။
ချစ်သူသည် တခါတရံ၌ ပန်းပွင့်နှင့်တူ၏။
သူမတူအောင် နှုးညံ့သော ပွင့်ချပ်လွှာများနှင့် မွှေးရနံ့များသူ့ထံတွင်ရှိ၏။
ချစ်သူသည် တခါတရံ၌ မုဆိုးနှင့်တူ၏။
ငါ၏အရိပ်နောက်မှ ထပ်ချပ်မကွာလိုက်ကာ ခြောက်လှန့်စေ၏။
ချစ်သူသည် တခါတရံ၌ ညနှင့်တူ၏။
ငါ့အား ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် တိတ်ဆိတ်မှုကို ပေးတက်၏။
ချစ်သူသည် တခါတရံ၌ မြို့တံတိုင်းနှင့်တူ၏။
ငါ့အား အရာခပ်သိမ်းတို့မှ ကာကွယ်ပေးတက်၏။
ချစ်သူသည် တခါတရံ၌ ကမ္ဘာမြေနှင့်တူ၏။
သူ၏ ဘ၀အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့အား ငါ့အတွက်နှင့် ဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်စွမ်း၏။
ဟိုမှာကြည့်စမ်း…ခပ်လှမ်းလှမ်းကာလတစ်ခုရဲ့ အလင်းရောင်ထဲမှာ တို့နှစ်ယောက် လက်တွဲလျှောက်နေတယ်…တကယ်တော့ ဒါဟာဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးနော်။
အဲဒီအခါကျရင် ငါဟာ ဖုန်းပြောနေကျ နေ၀င်ချိန်တွေကိုမှတ်မိနေသလို…မင်းမျက်ဝန်းနက်နက်တွေကိုလဲ မှတ်မိနေအုံးမှာပါ။
အဲဒီအခါကျရင် ငါဟာ ထမင်းလက်ဆုံစားဖူးချိန်တွေကို မှတ်မိနေသလို…ခပ်ထေ့ထေ့မင်းရယ်သံတွေကိုလဲ မှတ်မိနေအုံးမှာပါ။
အဲဒီအခါကျရင် ငါဟာ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်အနမ်းတွေကို မှတ်မိနေသလို…တံခါးဆောင့်ပိတ်တက်တဲ့ မင်းအကျင့်ကိုလဲ မှတ်မိနေအုံးမှာပါ။
အဲဒီအခါကျရင် ငါဟာ မပြန်ချင်ပြန်ချင် လမ်းခွဲချိန်တွေကို မှတ်မိနေသလို…မင်းကိုယ်တိုင်တီးပြတက်တဲ့ စည်းချက်မကျတကျ ဂီတာသံတွေကိုလဲ မှတ်မိနေအုံးမှာပါ။
အဲဒီအခါကျရင်လေ ငါဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မလိုအပ်တော့သလို ဟန်ဆောင်နေချိန်တွေကိုလည်း မှတ်မိကောင်းပါရဲ့နော်။
ဒါပေမဲ့လေ တစ်ခါမှ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပြစ်မတင်ပဲ ၊ မမှိတ်မသုန် ယုံကြည်ခဲ့ကြဖူးတာကိုတော့ သေချာမှတ်မိနေမှာပါချစ်သူ။
သူ့အတွက် တစ်ချို့စကားလေးတွေ. . .လူကိုယ်တိုင်ပြောမထွက်တဲ့ စကားလေးတွေ ဒီမှာရေးမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်။
သူဟာ ကျွန်မသူ့ကို အတ္တကြီးသူလို့ သမုတ်တိုင်းလည်း ကျေကျေနပ်နပ်လက်ခံတက်တဲ့သူ။
သူကတော့ ကျွန်မကို အတ္တမရှိသူရယ်လို့များ ထင်နေမလားပဲ။ ဒါဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးပြောင်းပြန်လည်သွားမှာပေါ့။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိပြီဆိုရင် မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာလေးပါ တွဲပါလာတက်တာ သူသိပါ့မလား။ မျှော်လင့်ချက်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထပ်လာတဲ့အခါ ၊ ထုထည်ကြီးမားသွားပြီး လောဘအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်။ တစ်ဘက်က ကိုယ်ချစ်ရသူဆီက လိုချင်တာတွေ သိပ်များလာတယ်။ ဒါကို အတ္တလို့ လှလှပပတပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် ကျွန်မမှာ သူမမြင်အောင်ဖွက်ထားတဲ့ အတ္တထုထည်ခပ်ကြီးကြီးတစ်ခုရှိတယ်။
ကျွန်မက သူ့အပေါ်သိပ်ကောင်းတာပဲလို့ သူခဏခဏပြောတက်တယ်။
ဘယ်သူ့ကိုမှမပေးဖူးတဲ့ နားလည်မှု ၊ ခွင့်လွှတ်မှု ၊ စာနာထောက်ထားမှု ဒါတွေကို ကျွန်မ ဘာမျှော်လင့်ချက်မှမရှိပဲ ပေးတာဆိုရင် ဘယ်သူယုံနိုင်မလဲ။
ဘယ်သူမှ ယုံနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မလဲ မယုံဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မရဲ့ လိုချင်တပ်မက်မှုတွေကို အရောင်တောက်နေတဲ့ ကျွန်မမျက်လုံးတွေနောက်မှာ ဖုံးထားနိုင်တယ်။
သူပြောနေကျစကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်မက တော်ရုံဟန်ဆောင်ကောင်းသူမှမဟုတ်တာ။ ကျွန်မရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို သူသိသွားရင် မပေးနိုင်လို့ ၀မ်းနည်းသွားမှာ အရမ်းစိုးရိမ်လို့ပါ။
ကျွန်မက သူ့ရင်ကို ပူအောင်အေးအောင်လုပ်နိုင်သူတဲ့။
သူ မသိချင်လို့ မြင်အောင်မကြည့်ခဲ့တာပါ ။ သူ့ကြောင့်ပူရတဲ့ အပူရုပ်နဲ့ ဟန်လုပ်ပြီး ပြုံးပြနေတဲ့ အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ။
သိပ်ပြောချင်တဲ့ စကားလေးငါးခွန်းလောက်ဟာ သူ့ရှေ့ရောက်ရင် ဆွံ့အနေသလိုမျိုး ၊ တော်တော်ကြိုးစားယူမှ တစ်ခွန်းတစ်လေလောက် အနိုင်နိုင်ပြောထွက်ခဲ့ရတဲ့ အကြိမ်ပေါင်း မနည်းဘူးဆိုတာ။
သူ့ကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေရင်တောင် ခပ်လှောင်လှောင်ရယ်သံတစ်ချို့အဖြစ်နဲ့ပဲ ရင်ထဲက ဖောက်ထွက်ရဲခဲ့တယ်ဆိုတာ။
လူတွေရဲ့ သံသယမျက်လုံး ၊ အထင်သေးတဲ့အကြည့်တွေအောက်မှာ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရပ်တည်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာ။
တာဝန်ယူတက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ လေးလံတဲ့အရာတွေ သူ့ပုခုံးပေါ်ထမ်းမထားစေချင်တာ။
ခွဲနေရတဲ့အချိန်တွေမှာ မေ့များသွားမလား ၊ သွေးအေးသွားမလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ရစ်ပတ်ပူလောင်နေသည့်တိုင်အောင် ၊ ဘာမှမဖြစ်သလို အားတင်းနေရတယ်ဆိုတာ။
သူမြတ်နိုးသလို ကျွန်မလဲ မြတ်နိုးတယ်။
သူတန်ဖိုးထားသလို ကျွန်မလဲ တန်ဖိုးထားတယ်။
သူချစ်သွားမဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကျွန်မလဲ သူ့အချစ်မှာ ပျော်ဝင်သွားချင်တယ်။
သူ အလင်းရောင်အောက်ကဖြတ်လျှောက်လာသည်ဖြစ်စေ ၊ နေစောင်းမှ ကတိုက်ကရိုက်ရောက်လာသည်ဖြစ်စေ ၊အမှောင်ဖုံးမှ ခေါင်းချဖို့ရောက်လာသည်ဖြစ်စေ ကျွန်မသူ့ကိုစောင့်နေတယ်ဆိုတာ။
အချစ်. . . အချစ်။
အော် အချစ်ဆိုလို့ ဟို အချစ်လို့ မထင်လိုက်နဲ့အုံး။
ကိုယ့်ကို အဆောင်က သူငယ်ချင်းတွေ အမတွေက ချစ်စနိုးနဲ့ အချစ်လို့ခေါ်ကြတာပါ။
အချစ်ရဲ့ အစ သမိုင်းကတော့ ချစ်သူမရှိလို့ခေါ်ကြတာလား ၊ ချစ်စရာကောင်းလို့ ခေါ်ကြတာလား ၊ မချစ်တက်လို့ခေါ်ကြတာလား သိတော့ပါဘူးလေ။
တို့ အဆောင်က လှည်းတန်းဘက်မှာ။
အဆောင်ကလူတွေက အချစ် ၊ အချစ်နဲ့ ခေါ်နေကြတော့ ပတ်ဝန်းကျင် အခန်းတွေကပါကြားနေရတာပေါ့လေ။
နောက်တော့ သူတို့ကပါ အချစ် ၊ အချစ်နဲ့ လိုက်ခေါ်ကြတော့တာပါပဲ။
အဆောင်ကလူတွေ ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းအော်တက်တာကလဲ အချစ်ရေ. . . အချစ်။
တစ်ခုခုရင်ဖွင့်စရာရှိရင်လဲ အချစ်ရေ ကိုယ့်အခန်းကိုခဏလာပါအုံး. . .။
အဲ. . . အချစ်တို့စပြီဆိုရင်လဲ . . . ငယ်သံပါအောင်အော်ရတဲ့အထိစတော့တာ။
အခုတော့ အချစ်ရေ . . အချစ်လို့ အခေါ်မခံရတာတောင်ကြာပေါ့။
“အကြင်နာတရားမရှိတဲ့ မိန်းမ” ဆိုပြီး ဖုန်းဆက်မဲ့အသံလေးတွေကိုလဲ မျှော်လင့်နေမိတယ်။
Categories ခံစားချက်, စပ်မိစပ်ရာ
ကိုယ်တို့ဟာ တစ်ခုတည်းသော ကောင်းကင်အောက်မှာ အတူတကွရှိနေကြတယ်ဆိုတာ. . .
နောက်ပြီး . . . ညတွေဟာ မင်းအတွက် လစ်ဟာနေသမျှ ကိုယ့်အတွက်လဲ ဗလာသက်သက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မနက်ထိအောင် မစောင့်နိုင်တော့ဘူးလို့များ မင်းခံစားလိုက်ရရင်
မိုးကိုနမ်းပါ ၊ မိုးကိုပဲနမ်းပါ ၊ မိုးစက်တွေကိုပဲ နမ်းစမ်းပါ။
ဟဲလို . . .
မင်း . . .ကိုယ့်အသံကိုကြားရဲ့လားဟင်. . . ကိုယ့်အသံကိုကြားရဲ့လားဟင်. . . ကိုယ့်အသံကိုကြားရဲ့လားဟင်. . .
ဘီလီမိုင်းယားစ်ရဲ့ နာမည်ကြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သူနဲ့ မိုင်ပေါင်းများစွာ အဝေးတစ်နေရာကို ရောက်နေရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဘာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတက်တယ်ဆိုတာ ဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။
ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်ဖက်က ဖက်တွယ်ဆုပ်ကိုင်စရာဆိုလို့ ချစ်သူအပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချမှုတစ်ခုသာ ရှိတာပါ။
မိုင်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီး ဝေးနေကြတာဆိုတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ နေ့လည်ခင်းဟာ ချစ်သူဆီမှာ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ဖြစ်နေတုန်းပဲပေါ့။ ချစ်သူကို လွမ်းလွန်းလို့ ၊ ချစ်သူကလဲ လွမ်းနေမှာသိလို့ ၊ ချစ်သူ့စကားသံလေးကြားချင်လွန်းလို့ ဖုန်းဆက်လိုက်ကာမှ ဖုန်းထဲမှာ ရယ်သံတစ်ခု ကြားလိုက်ရသတဲ့။
၀မ်းနည်းမှု ၊ နာကျင်မှု ၊ အခံရခက်မှုနဲ့အတူ အံ့သြတုန်လှုပ်မှုတွေ ဘယ်လောက်ထိ ဖိစီးနှိပ်စက်ခံလိုက်လေမလဲနော်။
ညဆိုတဲ့ ဖမ်းစားမှုတစ်ခုကနေ မလွတ်မြောက်နိုင်သေးခင် (မနက်အလင်းရောင်မလာခင်) အချိန်အတွင်း မင်းရဲ့တမ်းတစိတ်တွေကို အာရုံလွှဲပစ်ဖို့ (တခြားနှုတ်ခမ်းတစ်ခုခုကို နမ်းမဲ့အစား) မိုးကိုပဲနမ်းလိုက်ပါတော့လား အချစ်ရယ် လို့ ကြေကွဲစွာ တောင်းပန်ညည်းညူ လိုက်ရတဲ့ ခံစားချက်ကို ဘီလီမိုင်းယားစ် ရဲ့ အသံမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဘုရားရေ. . .
ချစ်သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဟိုဘက်ခြမ်း ဒီဘက်ခြမ်းမှာ ရောက်နေကြရတဲ့ အဖြစ်ဟာ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်တော့ တော်တော်ရက်စက်တဲ့ ကံကြမ္မာရဲ့ စီရင်ချက်တစ်ခုပါပဲလား။
အမှန်တော့ ပြသနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီ. . .ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင် ရှင်းလိုက်တာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က မှားရင်လဲ ရှင်းပြခွင့်တောင်းပြီး . . . သူများဘက်က အမှားလုပ်ခဲ့ရင်လဲ ရှင်းပြခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် လောကကြီးက ဒီထက်ပိုလှသွားမှာပါ။ ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောရသလဲဆိုရင် ကျွန်မဟာ ဒီ့အရင်က လုံးဝရှင်းပြခွင့်မပေးတက်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့် ကျွန်မရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးဟာ ထင်သလောက် မလှပခဲ့ပါဘူး။
– – – – – x x x x x – – – – – – x x x x x – – – – – – x x x x x x- – – – – –
“နင် ငါ့ကို မေ့လိုက်တော့ . . . ငါ့မှာဆက်ပြောစရာ စကားမရှိတော့ဘူး။”
“မဟုတ်ဘူးလေ သဲ. . . ကိုရှင်းပြမယ်. . . အဲဒါ ကို မဟုတ်ဘူး ကို့သူငယ်ချင်းပါ. . . သဲအထင်လွဲနေပြီ . .”
“မရှင်းနဲ့ မရှင်းနဲ့. . . ငါ့မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်တာ. . သူများပြောလို့သိတာမဟုတ်ဘူး ငါထင်လို့ကို ဒီအချိန်ကို သေချာလာတာ”
နောက်ဆုံးမှာ လုံးဝပိတ်ငြင်းနေသော ကျွန်မကို သူမနိုင်တော့။ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် ရန်ပွဲထဲသို့ သူ့သူငယ်ချင်းများပါ ပါလာတော့သည်။
“ညီမလေး သူရှင်းပြတာကို ခဏနားထောင်ပေးလိုက်ပါကွာ. . အကိုတို့သိပါတယ် အဲဒါ သူမဟုတ်ဘူး”
“အကိုဘာသိလို့လဲ အဲဒီအချိန် အကိုသူ့ဘေးမှာရှိလို့လား . . ရှိနေလို့ ဟုတ်နေရင်လဲ အကိုတို့အားလုံး ၀ိုင်းငြင်းကြမှာပဲ. . ပြီးတော့ နင်. . ငါ့ကို တသက်လုံးလာမပတ်သတ်နဲ့”
ရှင်းပြခွင့်ပိတ်ပြီး . . မျက်စိမှိတ်ငြင်းခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးရလဒ်က တရားခံဟာ သူမဟုတ်ပဲ တကယ်ပဲ သူ့သူငယ်ချင်းဖြစ်နေခဲ့တာ အချိန်တော်တော်ကြာမှ သိခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှမတက်နိုင်တော့ပဲ အားလုံးလက်လွန်သွားခဲ့ပြီလေ။
– – – – – x x x x x – – – – – x x x x x x – – – – – – x x x x x x – – – – – –
ကျွန်မမွေးနေ့ အရောက်ပြန်ခဲ့ပါမယ် ဆိုတဲ့ ကျွန်မရဲ့မွေးစားအကိုတော်ဟာ ၁၀ ရက်လောက် အလိုကတည်းက ပျောက်သွားလိုက်တာ မွေးနေ့ပြီး နောက်တရက်ကျမှ ပြန်ပေါ်လာပါတော့တယ်။
“သင်ဇာရေ ဖုန်းလာနေတယ်” ဖုန်းကို သွားမပြောချင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ မကိုင်မချင်း ခေါ်နေတော့မှာ သိနေတယ်။ ဖုန်းကိုကောက်ကိုင်လိုက်တော့ . . .
“ဟလို. . . ညီမလေး”
“အင်း . . ခဏ ခဏ ဘာမှမပြောသေးနဲ့အုံး. . . ညီမလေးအရင်ပြောမယ်. . .အခုစာသင်နေတယ် . . ခဏနေလဲမခေါ်နဲ့ . . နောက်ပြီးတော့လဲမခေါ်နဲ့ . . ဘယ်တော့မှလဲ မခေါ်နဲ့ . . ဒါပဲနော်။” ပြောပြီးပြီးချင်း ဖုန်းချပြီး စာသွားသင်လိုက်တယ်။
ခဏနေတော့ အမက အနားကပ်ပြီး လာထိုင်တယ်။ “ဘာဖြစ်ကြတာလဲ” ။ “ဘာမှဖြစ်ဘူး”။
“ညည်းတို့မောင်နှမကလဲ သတ်ချည်းနေကြတာပဲ. . . တယောက်တယောက်လဲ အလျှော့မပေးကြဘူး”
အမှန်တော့ သူကလဲ သူ့အိမ်မှာ အငယ်ဆုံး ဗိုလ်ကျနေကျ။ ကျွန်မကလဲ သူနဲ့ပတ်သတ်လာရင် အငယ်မို့ လုံးဝအလျှော့ပေးလေ့မရှိ။ သူကလဲ ဆက်မချော့တော့သလို . . ကျွန်မကလဲ လုံးဝပြန်မဆက်သွယ်တော့။
ရက်ပေါင်းတော်တော်ကြာပြီးမှ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက တဆင့်ပြန်ကြားခဲ့ရတာက . . .သူဟာ ကျွန်မမွေးနေ့မှာ တိတ်တဆိတ် ပြန်ရောက်လာပြီး ကျွန်မရုံးသွားနေကျ လမ်းမှာ အရုပ်ကြီးပိုက်ပြီး စောင့်နေခဲ့ပါသတဲ့။ ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ ကျွန်မလာရင် မြင်သာအောင် ကားထဲမှာလဲ ထိုင်မနေပဲ နေကာမျက်မှန်ကြီးတပ်ပြီး အရုပ်ကြီးပိုက်ထားတဲ့ သူ့ပုံစံဟာ တော်တော်လေး ကသိကအောက် ဖြစ်ခဲ့ပါသတဲ့။
အခုလို နှစ်တွေကြာလာတော့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ငါ တော်တော်ဆိုးခဲ့တာပဲလို့ ဆင်ခြင်မိတယ်။ နောက်များ ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် ကျွန်မ ကြိုးစားပါ့မယ်။ ကျွန်မဘေးက ချစ်ရတဲ့ ခင်ရတဲ့ သူတွေ ထပ်ပြီးမဆုံးရှုံးရအောင်လို့ပေါ့။
Categories ခံစားချက်, မွေးနေ့
အချစ်ဆုံးသို့ . . .
ဒါပေမဲ့ သူ ဒီစာကို ဖတ်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖေဖေက အင်တာနက်မသုံးတက်ဘူးလေ။ ညီမလေးက ပြန်ပြောပြရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့လေ။
ကျွန်မငယ်ငယ်လေးကတည်းက လူတွေက မေးတက်တယ်။ သင်ဇာ က အဖေနဲ့အမေ ဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်လဲတဲ့။ ကျွန်မအမြဲတမ်းပြန်ဖြေတက်တာ “အဖေ့ကို ပိုချစ်တယ်” လို့ပေါ့။ (အမေ့ရဲ့အမေ) အဘွားကလဲ ဆက်ဆက်ထိမခံ နာတက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်မှာ မတည့်ဆုံးကလဲ ကျွန်မနဲ့ဖေဖေပါ။ သားအဖနှစ်ယောက် တွေ့လိုက်မှဖြင့် တယောက်ကိုတယောက် နာကျင်အောင် ၊ မခံသာအောင် ၊ အရွဲ့တိုက် ပြောနေကြတာချည်းပါပဲ။
သူမကျေနပ်တဲ့အခါတိုင်း (ကျွန်မအသက် ၂၀ မကျော်ခင်အထိ ) ကျွန်မကို အိမ်ကဆင်းသွားဖို့ မကြာခဏ နှင်ချတက်တယ်။ ကျွန်မကလဲ စကားကို ၁ခွန်းမှအကျောမခံဘူး။ ချက်ချင်း အထုပ်ပြင်ပြီး အဖွားဆီလစ်တက်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဒိုင်ယာရီတွေ မကြာခဏ ခိုးဖတ်တက်တဲ့ ဖေဖေက သော့ခတ်ထားတဲ့ စာအုပ်ကို သံမှိုနဲ့ဖွင့်တာကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ပိုက်ဆံအိတ်ကို မွှေတက်လွန်းတဲ့ ဖေဖေဟာ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက သူ့ဓါတ်ပုံတွေ့တိုင်း ကြည်နူးသွားတက်ပြန်တယ်။
သူငယ်ချင်းတွေကို သူ့ထက်ပိုပြီး ဦးစားပေးမှာ စိုးရိမ်တက်လွန်းတဲ့ ဖေဖေဟာ ကျွန်မဆီ ဖုန်းဝင်လာတိုင်း အော်ဆဲတက်ပါတယ်။ ကျွန်မကို သူ့အနားက ခွဲသွားမှာ ကြောက်လို့ ချစ်သူမရှိစေချင်တဲ့ ဖေဖေက ကျွန်မအိမ်ထောင်မကျတော့မှာကိုလဲ တွေးပူတက်ပါသေးတယ်။ အမေ့အမျိုးတွေကို သိပ်မုန်းတဲ့ ဖေဖေက တစ်ခါတစ်ရံမှာ နားမလည်နိုင်လောက်အောင် နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ကူညီပေးနေတက်ပြန်သေးတယ်။
သမီးကြီးကို အငယ်တွေအတွက် လမ်းပြကြယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဖေဖေရေ. . . သမီးကို လူကြီးတစ်ယောက်လို မြင်ပေးပါ။
သမီး မအောင်မြင်သေးတဲ့အခိုက်မှာ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ယုံကြည်ပေးပါ။
သမီး လဲကျလို့ ငိုတဲ့အခါ ဖေဖေပါ လိုက်ငိုဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။
သမီးဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ကလန်ကဆန်လုပ်ခဲ့ပါစေ နောက်ဆုံးတော့ ဖေဖေခင်းတဲ့လမ်းကိုလျှောက်နေကြဆိုတာ သတိရပေးပါ။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာလေးက . . . ဖေဖေ ဖြစ်ချင်တာ ဘာလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြုပြီး သိအောင်လုပ်ပေးပါ။
Categories ခံစားချက်, မိသားစု
My belove sweety
..:: Be With U ::..
A moment I miss the most
ဒီလိုပြောခဲ့ကြတယ်. . .
Ян Аунг Пьо on အချစ်ဆုံးသို့ . . .
ဇေယျလင်းထင် on HappY BirthdaY U NainG
ဇေယျလင်းထင် on မိုးကိုနမ်းပါ (ဘီလီမိုင်းယားစ်…
nyiminn on မိုးကိုနမ်းပါ (ဘီလီမိုင်းယားစ်…
haymaroo on HappY BirthdaY U NainG